မျက်နှာဖုံးပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China Mask Manufacturers
SARS လား၊ ဒါမှမဟုတ် coronavirus pneumonia အသစ်လား၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အစားသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့မှုတိုင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အစားများ၏အရည်အသွေးသည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အစားများကိုအောက်ပါအချက် (၄) ခုမှပြည့်စုံစွာရှင်းပြပါမည်။ Barrier စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်း၊ နမူနာအနေအထားနှင့်အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များ၏အတားအဆီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဇယား ၁ တွင်ပြထားသည်။ ဇယား ၁ တွင်ကြည့်ပါ။
အကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းသုံးရမလဲ။ အကာအကွယ်အဝတ်အစားများအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ကျန်းမာရေးတို့နှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသဖြင့်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လက်ရှိတွင်လူသိများသောအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Dupont United States၊ United States Lakeland, 3M, Sperian စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်အဝတ်အစားများရရှိပြီးနောက်မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အမှတ် ၁ အသွင်အပြင်ကာကွယ်ရေး ၀ တ်စုံသည်ခြောက်သွေ့။ သန့်ရှင်းပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ထူးခြားချက်များ： ၁။ Meltblown အထည်သည် polypropylene ကိုအဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ fiber fiber အချင်းသည် 0.5-10 microns သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အရည်ပျော်သောအ ၀ တ်သည်လေကောင်းလေစစ်နိုင်ပြီးမျက်နှာဖုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းလည်းကောင်းသည်။ ၂။ အလွှာစုံမရှိသောအဆိပ်မရှိသော၊ မတည့်သော၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၃။ သက်တောင့်သက်သာရှိသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာအသွင်အမျိုးမျိုးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပတ်တီးချောင်းများနှင့်ထည့်သွင်းထားသည့်အမြှုပ်ကူရိုးများကိုညှိပါ။ 4. တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများ၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ လျှောက်လွှာ: ၁။ လျှောက်လွှာ၊ တည်ဆောက်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
အင်္ဂါရပ်များ： ၁။ မမြင်နိုင်သောပလတ်စတစ်နှာခေါင်းတံတားကလစ်၊ မတူကွဲပြားသောနှာခေါင်းတံတားပုံစံများ၊ လုံခြုံမှုကာကွယ်မှုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်၊ (၂) လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်းအသက်ရှူခြင်း - မျက်နှာပြင်ကိုလေအပေါက်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညင်ညင်သာသာအသက်ရှူခြင်းသည်သင့်အားကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်စစ်ထုတ်ထားသောလေကောင်းလေသန့်ပါရှိသည်။ 3. ပျော့ပျောင်းသော elastic webbing သည်ဝတ်ဆင်ခြင်း၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုထည့်သွင်း။ ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုအာမခံသည်။ (၄) Meltblown အထည်သည် polypropylene ကိုအသုံးပြုသည်။
Barrier စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း Barrier သည်အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များ၏အရေးအပါဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှုထောင့်သုံးခုဖြစ်သောအရည်အတားအဆီးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပိုးမွှားအတားအဆီးစွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အတားအဆီးဆိုသည်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်အစားသည်လူနာ၏သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့်အခြားရောဂါများမှကူးစက်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ရေ၊ သွေး၊ အရက်နှင့်အခြားအရည်များ၌ hydrophobicity အဆင့် ၄ ခုထက်ပိုသောရေ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း ...
CE FFP1 မျက်နှာဖုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။“ လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှု” နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ စမ်းသပ်မှုတွေကဘာတွေလဲ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်အ ၀ တ်အထည်များသည်အလွန်မြင့်မားသောဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
၁၂၃၄၅၆ နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၈